I-WATERPOINT → Isitsha sokuhambisa amanzi • Iziphuzo • Isembozo • I-Elkay Polska
Esihlwabusayo - eshibhile
amanzi ekhaya nasebhizinisini
Umuntu ubelokhu ezihambisana naye amanziimpilo igxile emithonjeni yayo, iziqu zabantu ezingumuntu nazo zonke izici zokuphila kwavela. Izilingo namuhla ukukhiqizwa kwamanzi nokusatshalaliswa zihambisana namadivayisi ayinkimbinkimbi nezinqubo zobuchwepheshe.
Inkampani yethu, Amaphoyinti Amanzi ubelokhu esebenza emakethe kusukela ngo-2004.
Singabantu abasabalalisi abakhethekile basePoland babaholi bomhlaba embonini.
Njengamanje sithengisa imikhiqizo yezinkampani: Acuva - Izibani ze-UV ze-UV, Isimonyo - abahambisa amanzi, U-Elkay - abaphuzayo nemithombo yamanzi, I-Metalco - izakhiwo ezincane, I-Valve Valve - umholi emkhakheni wokuqapha ezemvelo, izilinganiso (isb. ukugeleza, ingcindezi), ukuqoshwa kwedatha nokulawulwa kwenethiwekhi yokuphakelwa kwamanzi (isb. ukunciphisa ama-valve).
Futhi siyakumema ukuthi uzijwayeze neminye imikhiqizo yethu: KuCanFor.es futhi NgUmani.pl
firma Acuva yasungulwa ngo-2014. Inhloso yayo ukuxazulula izinkinga zamanje, ukunqoba izithiyo nokubhekana nezinselelo ezintsha ekunikezeni amanzi okuphuza aphephile. Igxila ezinhlelweni zokubulala amagciwane emanzini lapho isetshenziswa khona, kanye nakuhlelo lwe-modular OEM. Njengamanje, zonke izinhlelo ze-Acuva ziyahlolwa futhi zisetshenziswe cishe kuwo wonke amazwekazi emhlabeni jikelele.
Okuningi ngo-Acuva Technologies Inc. ungumholi womhlaba kwezobuchwepheshe UV-LED amanzi magciwane. Ziklama, zithuthukise futhi zenze izinhlelo ezithuthukile ze-UV-LED zamanje neziyimpumelelo zokubulala amagciwane emanzini. Inhloso yenkampani ukuhlinzeka ukufinyelela kwamanzi okuphuza ahlanzekile, ahlanzekile kubantu emhlabeni wonke, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe impilo ephezulu kubo.
Isimonyo yasungulwa ngonyaka we-1951 njengendawo yokusebenzela yokwenza izinsimbi yomndeni eyenzela izakhi zomkhakha wama-elekthronikhi.
Eminyakeni elandelayo, umkhiqizo unwetshwa ngu imikhiqizo yefriji futhi ngenxa yalokhu, kuqala ukukhiqiza abahambisa amanzi.
Njengamanje, kungumenzi wemishini enhlobonhlobo yalolu hlobo, esekhwalithi ephezulu kakhulu, izixazululo zesimanje nezobuchwepheshe kanye nomklamo wanamuhla, owenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu, okuqinisekisa amakhasimende ukusetshenziswa kweminyaka eminingi.
Imikhiqizo yezimonyo ithengiswa emazweni amaningi emhlabeni jikelele futhi iyaziswa ngekhwalithi yayo.
firma U-Elkay yasungulwa ngonyaka ka 1920 endaweni esenyakatho neChicago njengendawo yokusebenzela encane.
Kusukela lapho, ubesebenza ngokuqhubekayo ukukhiqiza abaphuzayo ne-spas yamanzingokuhamba kweminyaka, kufakazela ukunakekela kwethu ikhwalithi ephezulu kakhulu nezindinganiso.
Manje umholi wezwe kule makethe, yokwandisa njalo ukunikezwa kwayo kwabamukeli, ukuyandisa njalo ngamamodeli ahlome ngezixazululo zakamuva zobuchwepheshe, ezinjengokuthi: insiza engathintwa, i-Green Tricker counter, njll.
I-Metalco ifaka isitayela futhi iyaqhubeka nokuchaza inqubo yokudala eyaqala ngokusungulwa kwayo okokuqala ngo-1984.
Metalco kusho IStylngoba isitayela kumkhiqizo ngamunye nakuyo yonke imininingwane senza iMetalco yehluke emlandweni wayo wokuklama, kubuchwepheshe obusha bokusungula. I-Metalco iyinhlanganisela yokunethezeka okuhloswe ngayo ukuxazululwa kwemvelo.
Impumelelo yezentengiselwano yeMetalco ingumphumela wokucwaninga okuqhubekayo nokuhlola okunikelwe ukuklama, sibonga futhi nokunikela kwabakhi bezakhiwo abadumile nabaklami bedumela lamazwe aphesheya, ezintweni ezingavuthiwe nobuchwepheshe bamuva bokuqamba.
I-Valve Valve ukwakha futhi enze othomathikhi ukulawula ama-valve embonini yezamanzi yomhlaba.
Kusukela ngonyaka we-1957, umshayeli wethu umshayeli we-diaphragm ufake ama-valve alawula ukufakwa cishe kuwo wonke amazwekazi emhlabeni jikelele.
Noma ngabe ukuphathwa kokulahleka kwamanzi e-Southeast Asia, izindaba zokulondolozwa kwamanzi e-Saudi Arabia, noma izidingo zokusatshalaliswa komasipala base-US, sinikezela ngezisombululo zokulawulwa kwamanzi kohulumeni, emadolobheni, amabhizinisi kanye nosonkontileka emhlabeni jikelele .
Imikhiqizo yethu eminingi emisha izalwa ngesifiso esingokwemvelo sokuxazulula inkinga yohlelo lokusebenza.
Inkinga eyethulwe, ithimba lethu lochwepheshe kubuchwepheshe be-elekthronikhi, okokusebenzisa kanye nokulawula aliphindeli ocwaningweni nasekwenziweni kuze kutholakale isisombululo.
Bheka izithombe zomculi >>
Abahambisa amanzi abakhazimulayo baya ngokuya bavela ezinkampanini, emahhovisi, ngisho nasemakhaya abantu. Idivayisi yesimanjemanje yokusebenzisa amanzi ngegesi ...
Sinikeza abaphuza amanzi okuphuza imfundo, imboni yeHoReCa, ukunakekelwa kwempilo, ikhaya, amahhovisi, izikhungo zomphakathi, amapaki, izikhungo ...
Umfutho wamandla wokunciphisa amanzi, umthetho onesihlungi kanye negeji yokucindezela. Izinguquko zomfutho wamanzi ezenzeka ohlelweni lwamanzi zivame ukubangelwa, phakathi kwabanye, ...